Gondar Keessaa Namoonni Qe’ee Ofii Irraa Baqataa Jirra jedhu
Bitootessa 05, 2019
Walakkeessa Gonderii fi aanaalee naannoo jiran keessa baatii onkoloolessa darbee qabee sabatiinsi dhabamuu isaan hojii barsiisuu irratti kanneen boba’an dabalatee hojii dhiisanii gamasii baqachuu dubbatu.
Zoonii walakkeessa Gonderii fi itti gaafataaan qajeelcha barnootaa obbo Masfin Irkaab akka jedhanitti waaltaalee maallqaa irraan kan hafe waajjiraaleen mootummaa kanneen biroon hojii dhaaban illee keessumaa walitti bu’iinsi sun hojii baruu fi barsiisuu irratti dhiibbaa guddaa uume jedhan.
Waaltaaleen barnootaa martinuu cufamanii barattoonni kuma 5 fi barsiistonni kuma tokko ta’an barumsa dhaabaniiru jedhan.
Waggaa baranaa naannoos ta’e sadarkaa biyyaatti kan kennamu qormaata biyyoolessaa fudhachuuf barattoonni foormii hin guunne.
Itti gaafatamaan dhimmootii kominikeeshinii naannoo sanaa obbo Assemaaheny Asres VOAf akka ibsanitti yeroo ammaa naannoo sana keessa buqqaatota kuma 91tu argamu.kanneen kana deebisanii qubsiisuuf qarshii biliyoonaan laka’amutu barbaachisa jedhan.
Siinqeen Mallattoo Nagaa fi Araaraati: Dubartoota Sudaan
Korri Qorannaa Nageenya fi Misooma Afrikaa Irratti Xiyyeeffate Yunivarsitii Arsiitti Geggeeffame
Yoomiif Qajeelchaa rekoordii caaccabsee dorgommii Boston moo’e dorgommii aadaa ispoortii Itoophiyaa Amboo irratti Oromiyaan sadeessoo baate
Injifannoo Adawaa Argamsiisuu Keessatti Qoodni Oromoo Maal Fakkkaata Ture?
Lammiwwan Amerikaa fi Kan Keniyaa Balaa Helikoptaraan Dhuman